Amandla aphakamileyo eAmazon 500ml iitanki zamanzi zeTanki yeTanki China Manufacturer
Inkcazo:I-Amazon 500ml Diffuser,Isithambisi seoyile yeAmazon 500ml,Isixhobo samanzi saseAmazon
Home > Imveliso > I-Wood Diffuser > Amandla aphakamileyo eAmazon 500ml iitanki zamanzi zeTanki yeTanki
Umzekelo No.: DT-1651
[Umthamo ophakamileyo] Ioyile ebaluleke kakhulu inokuvelisa ukuya kuthi ga kwi-25-80ml yomswakama ngeyure kunye nokugubungela umswakama omkhulu kwindawo. Ngale tanki yamanzi i-500ml, ungonwabela ukuya kwiiyure ezingama-20 ngokuqhubekayo.
[I-Multifunction] Le yeza elimnandi linokusetyenziswa njengendawo yokunyibilikisa, ebusuku iLambu elinemibala emi-7 yothando lwe-LED kunye nomhlobiso wedesktop kunye noyilo lwendalo lweenkozo. I-ultrasonic diffuser ilungile kwigumbi lokuhlala, igumbi lokulala, igumbi lenkomfa, igumbi labantwana, i-sparoom, i-yoga, njl.
[Aromatherapy] Ngamaconsi ambalwa eoyile eyimfuneko, iaromatherapy diffuser inokwenza igumbi lakho libe yigadi yabucala, ligcwele ivumba kunye nevumba. Ukudinwa kwemini yonke kunye noxinzelelo luya kuhamba kunye nephunga elimnandi, imo yakho iya kuphakama ngaxeshanye.
[Ultrasonic Tech] Ikhuselekile kwaye izolile kunangaphambili. Ngetekhnoloji yeUltrasonic yakutshanje, isixhobo esichaseneyo siphula amanzi kunye neoyile eyimfuneko kwiisuntswana ezihle kakhulu ngaphandle kokusebenzisa ubushushu. I-ultrasonic humidifier iqinisekisa ukuthembeka koyilo oluyimfuneko lweemolekyuli kwaye ivumela ukufunyanwa lula komzimba okunempilo.
[Ukhuseleko & iwaranti] Yenziwe ngeABS kunye nePP, izinto zeBPA MAHHALA ngezinto ezingenamanzi ezisebenza ngaphandle kwemoto, ikhusela ioyile yeenkuni xa itshiswa ngaphandle.
I-Amazon Air Freshener Lavender Aroma I-Diffuser Qhagamshelana Ngoku
I-Amazon Portable Ultrasonic Aroma Home Fragrance Diffuser Qhagamshelana Ngoku
I-Amazon Jasmine eNyanisile ye-oyile yeHlabathi yeHlabathi yeDisco Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphakamileyo eAmazon 500ml iitanki zamanzi zeTanki yeTanki Qhagamshelana Ngoku
I-Ultrasonic Humidifier I-Amazon Australia Arhente yeoyile yeoyile Qhagamshelana Ngoku
IAmazon 400ml I-Wood Grain Steam Diffuser Ngexesha lesibali Qhagamshelana Ngoku
Umatshini we-scentuser Scents waseAmazon onamafutha afunekayo Qhagamshelana Ngoku
Ibhola Shape Umoya Humidifier Isithambisi seoyile i-Amazon Qhagamshelana Ngoku
I-Amazon 500ml Diffuser Isithambisi seoyile yeAmazon 500ml Isixhobo samanzi saseAmazon I-Amazon 400ml Diffuser I-Amazon Petal Diffuser I-Amazon Igumbi Diffuser I-Amazon Jasmine Diffuser Amazon Diffuser